B2B Kuwana: Tora rumwe runyorwa rwemari yako Martech Zone
B2B Kuwana: Tora runyorwa rwakawanda rwemari yako
Chipiri, August 29, 2006 Chipiri, August 29, 2006 Douglas Karr
Bhizinesi kuBhizimusi kutora kunogona kutyisa kwazvo. Kana iwe uri sangano rinopa dunhu rakakura nenhamba shoma yevashandi, iwe unoda kuona kuti yako nzira yekutora inoshanda. Kana paine mabhizimusi zviuru makumi mashanu mudunhu, ngatifungidzire kuti iwe unogona kubata 50,000 tarisiro pavhiki, kana mashanu pazuva. Izvi zvinoda kuti iwe uve nevatengesi makumi maviri. Izvo zvine hukasha kune rekutengesa uye telemarketing timu uye mikana ndeyekuti iwe hauna iro hombe simba rekutengesa!
Ko kana iwe uchingogona chete kubata nemabhizinesi zviuru zvishanu (5,000 mu1)? Iwe ungawana sei nekutarisa iwo mabhizinesi? Mhinduro yacho irimo mune akapusa masisitimu ekushambadzira e database anoshandiswa kune bhizinesi kuwana bhizinesi. Ini ndakapa ongororo iyi pamusoro pegore rapfuura kune imwe femu yedunhu, uye ikozvino isu tichangopedzisa gore redu rechipiri rekutarisira kwavari. Haisi rocket sainzi, ingori kutsvaga mumaindasitiri anoenderana neiyo solidagraphics yeako vatengi base.
Step 1: Nyora yako mabhizinesi. Iri ibasa iro makambani mazhinji e data anokupa iwe nemutengo uri pakati. InfoUSA, Dun naBradstreet, uye AccuData mamwe mashoma emakambani aya. Paunenge iwe wagamuchira iyo mishumo, zvakakosha kuti uiongorore uye uiunganidze mune data rine revo. Heino muenzaniso (Dzvanya kuti uone):
Makore MuBhizinesi neindasitiri - Kupinda%:
Bhizinesi Rekutengesa Vhoriyamu neindasitiri - Kupinda%:
Nhamba yeVashandi nemaindasitiri - Kupinda%:
Step 2: Ongorora Zvakaitika
Kupinda mukati ndiko chikamu chevatengi mune iyo nhanho iwe yawakafananidza neavhareji muzana muzana yezve tarisiro mune iyo nhanho. Mune mamwe mazwi, kana 25% yevatengi vako vanga vari mubhizinesi isingasviki gore, asi chete 10% yemabhizinesi ematunhu anga ari mubhizinesi isingasviki gore, saka iwe zvirinani kunongedza mabhizinesi matsva! Nekudaro, iwe uri kuwedzera mikana yako yekuwana tarisiro pane kutarisa kumakambani asingaenzanise.
Chiratidzo chekuudza kuti kana iwe uchigona kuita pane iyo data ndezve kungotarisa chimiro chemakona uye hukama mukati meindasitiri. Heano mamwe maitiro akajairwa (akadzika akaturika michero) kubva kumachati ari pamusoro:
Huwandu hweMakore mune bhizinesi: Cherekedza kuti ese maG & H ave neakakwirira sei mugore rekutanga kana zvishoma? Ini ndaizotora kubaya kwakadzama mumaindasitiri aya uye pamwe ndingaisa mari muNew Bhizinesi tarisiro zvinyorwa.
Sales Vhoriyamu: Nepo mazhinji maindasitiri achikwira uye achidonha mune yakanaka curve, ona kuti kuvaka kunokwira sei kumusoro? Saka… iyo yakakura fani yekuvaka, zvirinani!
Nhamba yeVashandi: Cherekedza mashandiro anoita indasitiri yebasa. Izvi zvinondiudza kuti huwandu hwevashandi hunogona kunge husiri chinhu mune iyo indasitiri.
Step 3: Isa zviwanikwa
Dai ndaida kuve nousimbe uye nekukurumidza, ini ndaingopa kambani yangu yedata nemisoro yemakona angu uye ndoshandisa iwo seashoma ekutarisa tarisiro mukati meimwe indasitiri. Makambani eData kazhinji haazokubhadharise iwe nekuita mimwe mibvunzo yakaoma kurwisa iyo data kuti uwane runyorwa rwako saka usanyara, bvunza! Nzira iri nani yekuzviita ndeyekuvandudza mamwe maalgorithms akavakirwa pachimiro, uye wozoisa iyo fomula kune vane tarisiro yekuwana huwandu hwakazara hwetarisiro. Ingorongedza tarisiro yako mukudzika kuitira, uye tanga kutora!
Step 4: Tonga!
Apo patakaita mishandirapamwe iyi kune mutengi wedu, takaongorora kuti chii chavaishandisa kubuditsa tarisiro. Kunzwisisa kuti mangani matarisiro avanogona kubata akatipa isu kuverenga kwataida kudzikisira avo ekutsvaga mazita. Isu takauraya 3-prong kuyedza kwakakonzera kuwedzera kwe10% mukutora!
Step 5: Ongorora mitsva mitsva uye tanga patsva
Iyo nharaunda inochinja sezvinoita hunhu hwevatengi vako. Izvo zvakakosha kuti uenderere mberi nekunatsa uye kugadzirisa ako mamaki algorithms uye kutsvaga.
Chinyorwa chekupedzisira: Kune mamwe mabhuku akazara akanyorwa pamaitiro ekushambadzira e database. Zvakaoma kutaurirana yakaoma dhatabhesi yekushambadzira maitiro mune imwechete blog yekupinda, saka ini ndatora rusununguko rwekuita yakawanda fungidziro uye kutora yakawanda yakawanda mapfupi. Maitiro chaiwo atakasundira mutengi uyu akatora mwedzi yakati wandei. Isu takacherekedza uye takafananidza 95% yeavo vatengi base kudzokera kuDun neBradstreet dhata kuti uwane mukurumbira chimiro. Patakasarudza tarisiro yedu yekupedzisira, isu zvirokwazvo takabvisa vatengi vavo varipo uye vachangopera nguva.
Ini ndaingoda kuratidza kuti kune zvimwe zvakapusa uye zvine hungwaru ongororo iwe yaunogona kuita kunze kweiyo Excel spreadsheet iyo ichavandudza rako bhizinesi kune bhizinesi kutsvaga kwekuedza!
Gore inotaura pamusoro pekuchinja kweMidhiya nzvimbo
Kutya haisi zano
Aug 29, 2006 na7: 56 PM
Ini ndaifunga ichi chaive chinyorwa chinonyanya kubatsira. Mune ruzivo rwangu, varidzi vemabhizinesi madiki havanyatso kuongorora izvi muindasitiri kana kuongorora musika uye zvichingodaro. Asi (zviripachena) kuita kudaro kunogona kubhadhara chaiko nekubatsira mabhizinesi aya kutungamira zvavanovavarira kuita kumatarisiro akanakisa. Kutenda kune iyo info!